ပေါ့ဘာ (Pogba) မီးတောက် ပိုပြီးကြီးထွားလာပြီလား
ပေါ့ဘာ (Pogba) မီးတောက်ပိုပြီးကြီးထွားလာပြီလား
16 Feb 2018 . 1:17 PM
ပေါ့ဘာ (Pogba) မီးတောက်ဟာ ပိုပြီးကြီးထွားလာပြီလား။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အ၀တ်လဲခန်းထဲက စည်းလုံးရေးဟာ ပေါ့ဘာရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ယိမ်းယိုင်သွားမလား။ နည်းပြတစ်ဦးဟာ ကစားသမားတစ်ဦးကို သူရဲ့ နည်းဗျူဟာလိုအပ်ချက်အရ အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ထားကစားမှာပဲ။ အဲဒီနေရာမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ ပုံစံနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်။ ပထမတစ်မျိုးက ကစားသမားဖြစ်သူကိုယ်တိုင် နေရာသစ်မှာ ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိလို့၊ ဒုတိယတစ်မျိုးက ကစားသမားဖြစ်သူရဲ့ ပင်ကိုယ်နေရာမှာ ထားမကစားလို့(ဥပမာ- ကွင်းလယ်ကစားသမားကို ခံစစ်မှာကစားခိုင်တာမျိုး)ပါပဲ။ ပေါ့ဘာဖြစ်ရပ်မှာဆိုရင် နေရာပြောင်းကစားခိုင်းတဲ့ နည်းပြမော်ရင်ဟို (Mourinho) လုံးဝမှားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကွင်းလယ်တိုက်စစ် Function ကနေ ကွင်းလယ်ခံစစ်ကို ပြောင်းကစားခိုင်းတာ၊ ပေါ့ဘာအနေနဲ့ မူလကစားနေကျနေရာထက် Deep ပိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ကစားနေရာတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဘာက Deeper Midfield Role မှာ အဆင်မပြေဘူး။ မော်ရင်ဟိုရဲ့ (၄-၂-၃-၁) ကစားကွက်မှာ ပေါ့ဘာက ကွင်းလယ်(၃)ယောက်တန်းအလယ်ဗဟိုနေရာမှာ ကစားချင်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာမှာ လင်ဂတ် (Lingard) က ခြေစွမ်းပြနေတယ်။ ပါရမီချင်းမတူညီပေမယ့် ကြိုးစားကစားလိုစိတ်အပိုင်းမှာ လင်ဂတ်က ပေါ့ဘာထက် သာတယ်။ ဒါကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေလည်း မြင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Attacking Midfield Role မှာ ကစားနိုင်တာ ဆန်းချက်ဇ် (Sanchez) လည်းရှိနေတယ်။ ဒီတော့ မော်ရင်ဟိုဟာ ပေါ့ဘာကို မာတစ်(Matic)နဲ့ အတူတွဲပြီး Deeper Midfield Role မှာထားကစားခဲ့တာပါပဲ။
အခွင့်အထူးခံပုံစံကို စွန့်လွှတ်လိုက်တော့ ပေါ့ဘာ (Pogba)
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့မှာ ပေါ့ဘာက သူ့ကို နေရာပြောင်းပေးဖို့ နည်းပြမော်ရင်ဟိုကို တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ ခံစစ်တာဝန်မယူချင်ဘူး။ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်မှာလိုက်ပါကစားချင်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ No 10 Role မှာမဟုတ်ရင်လည်း ဂျူဗင်တပ်စ်မှာ သူကစားခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်(၃)ယောက်တန်းရဲ့ ဘယ်တောင်ပံမှာကစားချင်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ။ သူ့ကို နေရာမပြောင်းပေးရင် ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အသင်းကနေ ထွက်ဖို့အထိစဉ်းစားသွားမယ်ဆိုပြီး ကောလာဟလတွေလည်း ထွက်နေတယ်။ ပေါ့ဘာဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသင်းအတွက် သူလုပ်ပြပေးခဲ့တာဟာ အရမ်းထက်မြက်ထူးခြားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရွိုင်ကင်း( Roy Kane)က “ ကွင်းလယ်မှာ ကစားမယ်ဆိုရင် (၂)နေရာ၊ (၃)နေရာလောက် ကစားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပေါ့ဘာအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီး ဘောလုံးကို အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရွိုင်ကင်းရဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ပေါ့ဘာအနေနဲ့ လက်ရှိနေရာမှာ ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားသင့်တယ်မဟုတ်လား။ ပြီးမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကို တောင်းဆိုသင့်တယ်မဟုတ်လား။ တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း မော်ရင်ဟိုဟာ ကစားသမားဖြစ်သူရဲ့ ခြေစွမ်းကို သတ်နေတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်တာမျိုးလည်း ရှိနေပါတယ်။ ပေါ့ဘာမီးတောက်ကို မော်ရင်ဟို ဘယ်လိုငြှိမ်းသတ်မလဲ။
ပေါ့ဘာ (Pogba) မီးတောကျ ပိုပွီးကွီးထှားလာပွီလား
ပေါ့ဘာ (Pogba) မီးတောကျဟာ ပိုပွီးကွီးထှားလာပွီလား။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအဝတျလဲခနျးထဲက စညျးလုံးရေးဟာ ပေါ့ဘာရဲ့စကားတဈခှနျးကွောငျ့ ယိမျးယိုငျသှားမလား။ နညျးပွတဈဦးဟာ ကစားသမားတဈဦးကို သူရဲ့ နညျးဗြူဟာလိုအပျခကျြအရ အဆငျပွတေဲ့နရောမှာ ထားကစားမှာပဲ။ အဲဒီနရောမှာ ခွစှေမျးမပွနိုငျဘူးဆိုတဲ့နရောမှာ ပုံစံနှဈမြိုးရှိနိုငျတယျ။ ပထမတဈမြိုးက ကစားသမားဖွဈသူကိုယျတိုငျ နရောသဈမှာ ကွိုးစားခငျြစိတျမရှိလို့၊ ဒုတိယတဈမြိုးက ကစားသမားဖွဈသူရဲ့ ပငျကိုယျနရောမှာ ထားမကစားလို့(ဥပမာ- ကှငျးလယျကစားသမားကို ခံစဈမှာကစားခိုငျတာမြိုး)ပါပဲ။ ပေါ့ဘာဖွဈရပျမှာဆိုရငျ နရောပွောငျးကစားခိုငျးတဲ့ နညျးပွမျောရငျဟို (Mourinho) လုံးဝမှားနတောမြိုးမဟုတျဘူး။ ကှငျးလယျတိုကျစဈ Function ကနေ ကှငျးလယျခံစဈကို ပွောငျးကစားခိုငျးတာ၊ ပေါ့ဘာအနနေဲ့ မူလကစားနကေနြရောထကျ Deep ပိုဖွဈတဲ့နရောမှာ ကစားနရောတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ပေါ့ဘာက Deeper Midfield Role မှာ အဆငျမပွဘေူး။ မျောရငျဟိုရဲ့ (၄-၂-၃-၁) ကစားကှကျမှာ ပေါ့ဘာက ကှငျးလယျ(၃)ယောကျတနျးအလယျဗဟိုနရောမှာ ကစားခငျြနပေါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အဲဒီနရောမှာ လငျဂတျ (Lingard) က ခွစှေမျးပွနတေယျ။ ပါရမီခငျြးမတူညီပမေယျ့ ကွိုးစားကစားလိုစိတျအပိုငျးမှာ လငျဂတျက ပေါ့ဘာထကျ သာတယျ။ ဒါကို မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျပရိသတျတှလေညျး မွငျပါတယျ။ ပွီးတော့ Attacking Midfield Role မှာ ကစားနိုငျတာ ဆနျးခကျြဇျ (Sanchez) လညျးရှိနတေယျ။ ဒီတော့ မျောရငျဟိုဟာ ပေါ့ဘာကို မာတဈ(Matic)နဲ့ အတူတှဲပွီး Deeper Midfield Role မှာထားကစားခဲ့တာပါပဲ။
ပွီးခဲ့တဲ့သောကွာနမှေ့ာ ပေါ့ဘာက သူ့ကို နရောပွောငျးပေးဖို့ နညျးပွမျောရငျဟိုကို တောငျးဆိုလိုကျတယျ။ ခံစဈတာဝနျမယူခငျြဘူး။ ကှငျးလယျတိုကျစဈမှာလိုကျပါကစားခငျြတယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ No 10 Role မှာမဟုတျရငျလညျး ဂြူဗငျတပျဈမှာ သူကစားခဲ့တဲ့ ကှငျးလယျ(၃)ယောကျတနျးရဲ့ ဘယျတောငျပံမှာကစားခငျြတယျလို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ။ သူ့ကို နရောမပွောငျးပေးရငျ ပြျောနိုငျမှာမဟုတျဘူး။ အသငျးကနေ ထှကျဖို့အထိစဉျးစားသှားမယျဆိုပွီး ကောလာဟလတှလေညျး ထှကျနတေယျ။ ပေါ့ဘာဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကို စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ဂုဏျယူဖှယျရောကျလာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသငျးအတှကျ သူလုပျပွပေးခဲ့တာဟာ အရမျးထကျမွကျထူးခွားတာမြိုးမရှိသေးပါဘူး။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ရှိုငျကငျး( Roy Kane)က “ ကှငျးလယျမှာ ကစားမယျဆိုရငျ (၂)နရော၊ (၃)နရောလောကျ ကစားနိုငျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ပေါ့ဘာအနနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပိုကောငျးအောငျလုပျဖို့ လိုအပျနပွေီး ဘောလုံးကို အာရုံစိုကျသငျ့ပါတယျ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ရှိုငျကငျးရဲ့ စကားအတိုငျးပဲ ပေါ့ဘာအနနေဲ့ လကျရှိနရောမှာ ပိုကောငျးအောငျ ကွိုးစားသငျ့တယျမဟုတျလား။ ပွီးမှ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ဆန်ဒကို တောငျးဆိုသငျ့တယျမဟုတျလား။ တခွားတဈဖကျမှာလညျး မျောရငျဟိုဟာ ကစားသမားဖွဈသူရဲ့ ခွစှေမျးကို သတျနတေယျဆိုပွီး ဝဖေနျတာမြိုးလညျး ရှိနပေါတယျ။ ပေါ့ဘာမီးတောကျကို မျောရငျဟို ဘယျလိုငွှိမျးသတျမလဲ။
by Ko Kyue . 59 mins ago
ခံစစ်ပိုင်းအမှားတွေကြောင့် ၀က်ဖို့ဒ်နဲ့ သရေတစ်မှတ်စီ ခွဲယူခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်